Ukwaziswa nokuhlonishwa: Abesifazane ebuholini – Msunduzi News
Ukwaziswa nokuhlonishwa: Abesifazane ebuholini
By Zakhele Nyuswa
UMSUNDUZI ubungaza abesifazane, hhayi ngeNyanga yabesifazana kuphela kodwa unyaka wonke.
UNks uMosa Molapo
IMeneja Jikelele kwaCorporate Services
Ubhekele ukuhlinzeka ukulawula ngokweqhingasu kwaHuman Resources; kwaLegal Services; kwa-Information Communication Technology Services nakwaSecretariat & Auxiliary Support Services kuMasipala. UNks wakwaMolapo uphathe izikhundla eziphezulu eziningi kwezemfundo ephakeme nasemphakathini elokhu ethola ulwazi oluningi kwezokuhlela. Ugxile futhi ulandela imigomo emithathu, eyizinsika zempilo yakhe, ayithatha ngokuthi iyona emiholayo nayilandelayo njenge‘Nkanyezi Yenyakatho’. Lezi zinsika Ukubekezela, Ukuphikelela noKuthandaza’. OwakwaMolapo uthi;
Lokhu kungenze ngakwazi ukugxila nginganyakaziswa lutho kungakhathaleki ukuthi izimo zinjani futhi kuhlala kungikhumbuza ukuthi yize ngikangabukeka kanjani ngeso ngibonwa njengomzimbamunye, kodwa angingedwa. Ukuthandaza kuhlala kunginikeza isiqiniseko sokuthi ngiyisimanga, ngakhiwe angaze ngesaba ukufeza nokunqoba lapho ngifinyelela khona, ngingabanaki labo abafenyisayo empilweni yami.
UDudu Ntombenhle Gambu
iBamba LeSikhulu Esiphezulu Sezimali
UDudu Gambu waqala ngowezi 2006 kuMasipala uMsunduzi uyiMeneja Enkulu kwaSupply Chain Management. Ukhupheke nezikhundla ekuwona uMasipala elokhu ethola amakhono nolwazi olubalulekile. Usebenze ezikhundleni ezidinga ukuzibophezela okukhulu ezinhlanganweni ezihlonishwayo eziningi njengakwaUmngeni Water. OwakwaGambu obeyimeneja enkulu kusuka ngowezi-2011, uneMaster in Business Administration, phakathi kwezinye iziqu zakhe. Ubuye abe yilungu leChartered Institute of Procurement and Supply Professionals
UMadeleine Jackson uyiMeneja Enkulu eHhovisi leMeneja Yedolobha. Umsebenzi wakhe omkhulu ukuhlinzeka okusekela okwezinqumo, okweqhingasu nokokuqhuba umsebenzi kweMeneja Yedolobha. Izimiso zakhe ukungagudluki kwakwenzayo, ubuqotho, ukuzinikela nezomphefumulo. Umyalezo kaJackson kwabesifazane abanentshisekelo yokuba izimeneja eziphezulu uthi: “Unikeziwe amandla waphucwa igunya”. Uthi lokhu kusho ukuthi akwanele ukunikezwa isikhundla sokuphatha/sobuholi okunga‘mandla’, okudingakalayo ukukwazi ukulawula futhi ube negunya ngesimo esikhona ngawo ‘amandla’ onikezwe wona.
IMeneja: kwaCommunications ne-IGR
UThobeka Mafumbatha unolwazi olwenabile njengoba esebenze nezinhlangano ezifana neSA Tourism, uMasipala Wesifunda i-OR Tambo kanye neSouth Africa Social Security Agency. UMafumbatha ubheke ezokuxhumana nezizinda zezindaba, ukwazisa ngezemisebenzi, ubudlelwano beminyango kaHulumeni nezokuxhumana kwezamabhizinisi. Izimiso zakhe zigxile ezwini likaMdali. Ukholwa wukuthi uSomandla iluthando ngakhoke kufanele sithandane. UMafumbatha ukholelwa nasekutheni abasefazane kufanele bafukulane ukuze bakhe umphakathi ongcono. “Labo abaphezulu kufanele baphendle indlela yalabo ‘abaphansi’. Umphakathi udinga imbokodo enganyakazi, hhayi edonselana yodwa phansi.”
Imigawulo emisha yoMsunduzi
Previous post: Madodakazi engabadi: Umzabalazo uyaqhubeka
Next post: OwaseNamibia udle ubhedu kuSPAR 10km